हिमालय खबर | एनआरएनए अमेरिका चुनाबले दिएको पाठ
प्रकाशित १७ जेष्ठ २०७८, सोमबार | 2021-05-31 08:12:51
एनआरएनए अमेरिकाको आइतवार मध्यरातमा आएको नतिजापछि विभिन्न कोणवाट विश्लेषण भईरहेको छ । अध्यक्ष पदमा निकै प्रतिस्पर्धा देखिएको यो चुनावमा करिब चारसय भोटको फरकमा बुद्धि सुवेदीले जित निकाल्न सफल भए ।
अध्यक्ष पदमा मतका आधारमा तेस्रो स्थानमा परेका डा. अर्जुन बञ्जाडेले दोस्रो स्थानमा परेका कृष्ण लामिछाने र पहिलो भएका सुवेदी दुवैलाई कडा टक्कर थिए ।
तुलनात्मक रुपमा डा. बञ्जाडेको चुनाव अभियान तडक भडक थिएन । चुनावमा जित निकाल्न नसकेपनि डा. बञ्जाडेले प्राप्त मतलाई सभ्य प्रचारको सम्मान जनक नतिजा भनेर लिईएको छ ।
यो चुनावमा अध्यक्षका प्रत्यासी कृष्ण र बुद्धि दुवैले आफ्नो प्यानल बनाएका थिए । तर, मतदाताले भने दुवैको प्यानललाई स्विकार गरेनन् । कृष्ण लामिछाने प्यानलबाट वरिष्ठ उपाध्यक्षमा देखिएका कृष्णजीवी पन्तले सजिलैसँगै जित्न सफल भए । उपाध्यक्षमा विकास उप्रेती, महिला सचिव सुनिता कँडेल सापकोटा पनि कृष्ण प्यानलवाट जित्नेमा पर्छन । अधिकांश मतदाताले प्यानल बनाएको रुचाएका थिएनन् । प्यानलमा नपरेका बाला घिमिरे लगायतले पनि जिते ।
यस पटकको चुनावमा निर्वाचन समितिले पनि कमजोरी देखाएन । अन्तिममा जुन तरिकावाट चुनावको नतिजा सार्वजनिक गरियो यसले यो सकरात्मक पक्ष थियो । आईसीसी उपाध्यक्ष सोनाम लामा, अध्यक्षका तीन उम्मेदवारका प्रतिनिधि आईसीसी प्रतिनिधि सवैले नतिजा सार्वजनिक गर्न आयोजित कार्यक्रममा चुनाव पारदर्शी रुपमा भएको रेकर्डमा बताए । यसले गर्दा चुनावमा धाँधली भयो भनेर आरोप लगाउन तयारहरुको मुख बन्द गरिदिएको छ ।
चुनावमा यति धेरै ध्रुवीकरण नभएको भए पनि हुन्थ्यो भन्नेहरु छन् । एनआरएनए समुदायको साझा संस्था भएकाले चुनावमा प्रचार प्रसारमा यति विधि नगरेको नभिडेको भए पनि हुन्थ्यो भन्नेहरु छन् । चर्को रुपमा चुनाब लाग्दा यो खर्चिलो पनि बन्यो ।
चुनावलाई आफ्नो पक्षमा पार्न बुद्धि र लामिछाने दुबै समुह सकृय थिए । तर, चुनाबमा लामिछाने पक्षका लागि त्यो प्रभावकारी ठहरिएन । समुदायका मतदाताले को कता छ भन्ने वास्तै नै गरेनन् ।
बरु यसपटकको निर्वाचनमा राजनीति पार्टीका पक्षमा खुलेर उत्रिने, पदको गरिमा राख्न नजान्ने, छाडा केही उम्मेदवारले भने गतिलो दनक भेटे । संस्था भित्रै छिरिसकेका तिनलाइ समेत सदस्य मतदाताहरूले 'एनआरएनए तिम्रो खेल्ने मैदान होइन' भन्दै नकआउट गरिदिए । भविष्यका लागि यो एउटा गतिलो सवक पनि हो ।
अध्यक्ष: बुद्धि सागर सुवेदी
बरिष्ठ उपाध्यक्ष: कृष्ण जीबी पन्त
उपाध्यक्ष: सुमन थापा
उपाध्यक्ष: गोपेन्द्र भट्टराई
उपाध्यक्ष: डिलु पराजुली
उपाध्यक्ष: बिकाश राज उप्रेती
उपाध्यक्ष: दिक्षा बस्नेत (महिला तर्फ)
महासचिव: अन्जन कुमार चौलागाइ
सचिव: अनुप खनाल
सचिव: सुनिता कंडेल (महिला तर्फ)
कोषाध्यक्ष: राजीव श्रेष्ठ
सहकोषाध्यक्ष: अग्नि ढकाल
महिला संयोजक: सुन्दरी गुरुङ
युवा संयोजक: त्रिभुवन पाण्डे
बाला राज घिमिरे
अन्तराष्ट्रिय समन्वय परिषद सदस्य
संजीव कुमार श्रेष्ठ
कस्ले कति मत पाए ? (सबै उम्मेदवारको मत विवरण सहित)